Otu esi etinye MariaDB 10.6 na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
October 30, 2021 August 1, 2021 by Jọshụa James
Mepụta ma bubata ebe nchekwa MariaDB
Wụnye MariaDB na Rocky Linux
Otu esi echekwa MariaDB (ederede nchekwa)
Otu esi abanye n'ime ihe atụ MariaDB
MariaDB bụ otu n'ime ọdụ data mepere emepe kacha ewu ewu na-esote onye malitere ya MySQL. Ndị okike mbụ nke MySQL mepere MariaDB na nzaghachi egwu na MySQL ga-abụ na mberede na-aghọ ọrụ a na-akwụ ụgwọ n'ihi na Oracle nwetara ya na 2010. Site na akụkọ ihe mere eme nke ime usoro ndị dị otú ahụ, ndị mmepe n'azụ MariaDB ekwewo nkwa na ha ga-edebe ya na-emeghe isi na pụọ ​​na egwu dị otú ahụ dị ka ihe merenụ. MySQL.
MariaDB aghọwo nnọọ ewu ewu dị ka MySQL ya na ndị mmepe, nwere njiri dị ka nchịkọta dị elu nwere ụyọkọ Galera 4, cache/indexes ngwa ngwa, igwe nchekwa, yana atụmatụ/mgbakwunye ị gaghị ahụ na ya MySQL.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye MariaDB 10.6 na Rocky Linux 8.
Ndabara MariaDB jikọtara ya na Rocky Linux AppStream ebe nchekwa na-enye MariaDB 10.3, nke dị ugbu a nke ọma ụbọchị. Iji wụnye ụdị ọhụrụ, ọtụtụ ga-ele anya na MariaDB 10.5 yana ntọhapụ kwụsiri ike kacha nso nso a MariaDB 10.6. Enwere ike itinye nke ọ bụla site na ịgbakwunye onye ọrụ MariaDB ebe nchekwa.
Mbụ, mepee site na iji editọ ederede ọ bụla wee mepụta a MariaDB faịlụ nchekwa na sistemụ gị dị ka ndị a:
Na-esote, detuo ma mado ahịrị ndị a n'ime faịlụ maka ụdị kachasị ọhụrụ MariaDB 10.6:
Ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ oge ọzọ MariaDB 10.5, wee jiri ihe ndị a:
Chekwaa faịlụ (CTRL+O) wee pụọ (CTRL+X).
Iji mechaa wụnye ebe nchekwa ọhụrụ, ịkwesịrị imelite ebe nchekwa sistemụ gị maka Nkume linux imekọrịta ebe nchekwa agbakwunyere ọhụrụ. Jiri iwu a ka imelite dịka ndị a:
Ugbu a ị wụnyela ebe nchekwa ahụ ma melite ebe nchekwa sistemụ gị iji gosipụta mgbanwe ọhụrụ, oge eruola ịwụnye. MariaDB. Iji mee nke a, jiri iwu a ka ịwụnye:
Site na ndabara, MariaDB agaghị eme ya na buut, ma ọ bụghị ịgbanye ya, ị ga-achọ ime ha abụọ dị ka ndị a:
Iji malite MariaDB, pịnye ihe ndị a:
Iji malite MariaDB na boot na ndabara, pịnye ihe ndị a:
Ozugbo emechara, ị ga-enyocha na nke gị MariaDB ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma site na iwu a:
Ị kwesịrị ị nweta (okwa ok) ịmara na ihe niile na-arụ ọrụ, ọmụmaatụ n'okpuru:
Mgbe ị wụnye MariaDB Ọhụrụ, ntọala ndabara ka a na-ewere dị ka adịghị ike site n'ọtụtụ ụkpụrụ ma na-ebute nchegbu maka ike ikwe ka mbubata ma ọ bụ na-erigbu ndị hackers. A ngwọta bụ na-agba ọsọ nwụnye nche script na-abịa na MariaDB ndozi.
Mbụ, jiri iwu na-esonụ iji malite (mysql_secure_installation):
Na-esote, a ga-enye gị ngwa ngwa na-arịọ gị ka ịbanye gị (MariaDB mgbọrọgwụ paswọọdụ). Maka ugbu a, pịa ( Tinye) igodo ka edobeghi mgbọrọgwụ okwuntughe dịka n'okpuru:
Ọzọ, ụdị (NA) wee pịa tinye ka ịtọlite ​​​​ (mgbọrọgwụ) paswọọdụ dị ka n'okpuru:
Usoro ajụjụ ndị ọzọ ị nwere ike ịkụ n'enweghị nsogbu ( Tinye), nke ga-aza (NA) n'ajụjụ niile a na-ajụ gị (wepụ ndị ọrụ na-amaghị aha, gbanyụọ nbanye mgbọrọgwụ dịpụrụ adịpụ, wee wepụ nchekwa data ule). Rịba ama (NA) bụ isi, nke pụtara na ọ bụ azịza ndabara mgbe ị pịa ya ( Tinye) isi.
Nzọụkwụ a dị mkpa maka nchekwa nchekwa data MariaDB na e kwesịghị ịgbanwe ma ọ bụ wụpụ ọ gwụla ma ịmara ihe ị na-eme. Ọmụmaatụ n'okpuru:
Nchịkọta nke ihe kwesịrị ka eme n'elu:
Ịtọ ntọala paswọọdụ maka mgbọrọgwụ akaụntụ.
Iwepu akaụntụ mgbọrọgwụ nke a na-enweta site na mpụga onye ọbịa mpaghara.
Iwepu akaụntụ onye ọrụ amaghị aha.
Iwepu nchekwa data ule, nke ndị ọrụ amaghị aha nwere ike ịnweta na ndabara.
Nzọụkwụ a dị mkpa maka nchekwa nchekwa data MariaDB na e kwesịghị ịgbanwe ma ọ bụ wụpụ ọ gwụla ma ịmara ihe ị na-eme.
Ekele, ị tinyela MariaDB na Rocky Linux 8. Ugbu a na ị dechara ederede nche nwụnye, banye n'ime gị. MariaDB Enwere ike ime nchekwa data site na iji ihe ndị a:
A ga-akpali gị ịbanye gị mgbọrọgwụ paswọọdụ, na mgbe ahụ, ị ​​ga-abanye nke ọma n'ime MariaDB ọdụ data data:
Iji pụọ na njedebe MariaDB, jiri iwu a:
Ekele, ị tinyela MariaDB 10.6 nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ụdị MariaDB kachasị ọhụrụ na ntọhapụ kwụsiri ike kachasị ọhụrụ Rocky Linux 8. N'ozuzu, ụdị dị na iyi ngwa a na-anabata iji. N'agbanyeghị nke ahụ, a ga-atụ aro ịkwalite na 10.5 ka ọ mara mma ugbu a ma e jiri ya tụnyere 10.6, yana enwere uru dị ukwuu na arụmọrụ yana nkwalite. Ọ bụrụ na ị na-eme nkwalite, jide n'aka na ị na-akwado nchekwa data gị mgbe niile tupu ime ya iji zere ọtụtụ awa mgbu na nkụda mmụọ.
Categories Nkume linux Tags MariaDB, Nkume linux Mail igodo